Article - Digital Marketing service Myanmar - TechMe
Have any Questions: +959974364427
How to use two font unicode and zawgyi in browser
How to change myanmar unicode font
ဒီတစ်ပတ်အတွက် TechMe အနေနဲ့ 🖼️design ပုံ လေးတွေဆွဲ၇တာ ဝါသနာပါသူတွေ၊ 👨‍💻 ကိုယ့်ရဲ့ facebook page အတွက် design ပုံတွေတစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဆွဲချင်သူတွေ၊ 👸 ချစ်သူ ...
အခုလက်ရှိ စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြော်ငြာလေးပါတွဲလုပ်လာကြပြီနော်… ?ဘာဆိုင်လေးပဲဖွင့်ဖွင့်၊ ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လုပ်? Business Pages တွေဖွင့်ပြီး သူ့ထက်ငါအပြိုင် ကြော်ငြာလုပ်တာတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေက တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်း၊ အရေးပါတဲ့အပိုင်း ဖြစ်လာပါပြီနော်။ မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများကို ...
WordPress Myanmar PDF
Important facts of facebook marketing
Facebook Marketing နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေထဲက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်အချက်က အရေးပါဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ?? 1) Planning & idea (ဘယ်လို idea တွေသုံးပြီး ဝယ်သူတွေ ကိုဆွဲဆောင်မလဲဆိုတဲ့ ...
Already start your business?
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီလား ဒါမှမဟုတ် လုပ်ကိုင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီလား ❗❗ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝယ်သူတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပီလဲ..??? ဝယ်သူတွေကရော မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်လာဖူးပါလဲ…??? ဒီမေးခွန်းတွေအဖြေရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်တွေအားလုံးက Facebook ကနေကြော်ငြာခြင်းကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ Facebook မှာကြော်ငြာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ…??? ...
Facebook advertisement result
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကို ဒီလိုလေးမေးဖူးတယ် သူ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Facebook မှာကြော်ငြာလုပ်ချင်တယ်တဲ့ ? သူအကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ ? Likes တွေဘယ်လောက်ရမှာလဲ ? Followers တွေဘယ်လောက်ရမှာလဲ…စတဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်………….❗❗ ကျွန်တော်ဖြေရခက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်သိတဲ့ ဗဟုသုတကို ရှယ်ပေးပါဆိုရင် ကျွန်တော်ဖြေနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ဆီကို ...
We haveanetwork of digital and technology.We service it and we share it.Follow Us & Contact us today and we’ll help you to get started.
Copyright © 2020 TechMe Myanmar. All Rights Reserved.